Nbudata POSKY Boeing 777-200 Pack FSX & P3D - Rikoooo
downloads 196 217
Emelitere na 18 / 01 / 2013 ndakọrịta P3D : Lee ya, Boeing 777-200 (Project Open Sky) ihe atụ nke 3D nke adịghị ike! Ihe ngwungwu a zuru oke ma tinye nkpokọputa nke 3D mebere na 2D panel + gauges ahaziri, ngwa ọdịnala dabere na ọtụtụ ihe ịtụnanya ndị ọzọ. Ihe ngwugwu echepụtara ma nwalee site na rikoooo maka FSX-SP2 /P3D. Ndenye ego diri POSKY.
Kopịpị mebere ahụ bụ ịma mma dị egwu, ihe mpụga dị mma, ezigbo ọkachamara. Ma dị ka nke ahụ ezughị, agbakwunyere m ederede anọ: Air France, Emirates, American Airlines na British Airways gbakwunyere ụdị abụọ na ụdị ụda abụọ: Rolls-Royce Trent maka Emirates na American ụgbọ elu, General Electric na Air France British Airways. Nke a add-on bụ otu ihe na Fleet Air France maka FS2004 mana ọ dabara na ya ịrụ ọrụ FSX gbakwunye mmelite na uda ozo na uda.
Ọ bụrụ na gị gauges niile bụ nwa, na-eji Gauges Recovery aka dozie nsogbu: Lelee nhọrọ "System Files": pịa ebe a
Onye edemede: Project Open Sky